OZI RAMBLER ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ: ISI IHE NA NGWỌTA - RAMBLER MAIL - 2019
Ozi Rambler - ọ bụ ezie na ọ bụghị ozi a kacha mara amara ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịnwe igbe igbe ebe a. Ma mgbe ụfọdụ, na-agbalị ọzọ ịmepe ozi ha, ha nwere ike izute ụfọdụ nsogbu.
Rambler adịghị emeghe ozi: nsogbu na ngwọta ha
Ọ dabara nke ọma, nsogbu ndị a na-adịghị edozi anya na-adịchaghị adị. N'okwu a, enwere ọtụtụ ihe kpatara ya.
Ebumnuche 1: Nbanye ma ọ bụ paswọọdụ ezighị ezi
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị na-egbochi onye ọrụ ịbanye na igbe akwụkwọ ozi.
Enwere otutu ngwọta ebe a:
Ịkwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na CapsLock agbanwuru. N'okwu a, kpochapụ igodo wee banye data.
Tinyere nhazi Russia. Ntinye data bụ naanị na Latịn. Okirikiri ụzọ mkpirisi keyboard "CTRL + ịgbanwee" (ma ọ bụ "Alt Shift") ma gbalịa itinye aha njirimara na paswọọdụ.
Ọ bụrụ na ụzọ ndị dị n'elu anaghị enyere aka, gbalịa ịmegharị paswọọdụ. Maka nke a:
Na windo nbanye anyị na-ahụ njikọ ahụ "Chefuola paswọọdụ gị?" ma pịa ya.
Na windo ohuru, tinye tinye adreesị ozi-e gị, tinye captcha (ederede site na mbido) ma pịa "Na-esote".
Dee nọmba ekwentị (1), nke e kwuru kpọmkwem n'oge ndebanye aha na pịa "Nweta koodu" (2).
A ga-eziga koodu nkenye na nọmba ekwentị site na SMS. Tinye ya n'ọhịa nke na-egosi.
Ọ na-anọgide na ịnweta paswọọdụ ọhụrụ (3), gosi ya site na ịbanye (4) ma pịa "Chekwa" (5).
Ebumnuche 2: Nsogbu na ihe nchọgharị
Ọrụ ozi mail Rambler dị nnọọ mkpa banyere ihe nchọgharị ahụ na-aga na ya. Ya mere, o nwere ike ghara ịmalite ma ọ bụrụ na eji oge eji eme ihe ma ọ bụ oge ochie iji nweta Ịntanetị, ma ọ bụrụ na agbanyere njirimara ọnọdụ na / ma ọ bụ ma ọ bụrụ na usoro ahụ jupụtara na cache na kuki. Ka anyị gaa n'usoro.
N'ezie, ọ dị mkpa iji melite ọhụụ ọ bụghị naanị na ihe nchọgharị ahụ, kama ọ bụla ihe omume eji na kọmputa, yana sistemụ onwe ya. Nke a bụ onye bụ isi na-akwụsi ike nke ngwa ngwa na components nke os. Anyị edeworị banyere otu esi esi wụnye mmelite maka ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu. Naanị gbasoro njikọ dị n'okpuru ebe a, chọta usoro ihe omume gị n'ebe ahụ ma gụọ ntuziaka zuru ezu ka ịwelite ya.
Gụkwuo: Otu esi emelite ihe nchọgharị weebụ gị
Mgbe ị wụnye melite maka ihe nchọgharị ahụ, gbalịa gaa na Rambler Mail, nsogbu ahụ na ọrụ ya kwesịrị idozi. Ọ bụrụ na nke a emeghị, gaa n'ihu usoro ndị ọzọ.
Kpochapụ kuki na oghere
Kuki (kuki) - faịlụ nke ihe nchọgharị weebụ na-echekwa ozi achọtara site na sava na ozi onye ọrụ. Ihe ndị a gụnyere logins na okwuntughe, ntọala a kapịrị ọnụ, ọnụ ọgụgụ, na ndị ọzọ. Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ, ihe nchọgharị ahụ na-ezigara ya data a, nke na - enye gị ohere ịchọpụta onye ọrụ, na n'otu oge ahụ na - agbago usoro nbudata. N'agbanyeghị mkpa na uru nke kuki, mgbe ụfọdụ, faịlụ a na-arụ ọrụ dị ka ọrụ nke ụfọdụ saịtị na-ajụ ịrụ ọrụ. N'etiti ndị ahụ na Rambler, iji hụ na ọrụ ya, a ghaghị ehichapụ faịlụ a.
Gụkwuo: Nhicha kuki na ihe nchọgharị weebụ
Mgbe ị gụchara isiokwu ahụ na njikọ n'elu ma na-eme usoro ndị a kọwara na njedebe ya, gaa na Rambler Mail. Ọ bụrụ na ọ kaghị arụ ọrụ, ị ga-achọkwa ọzọ ịchekwa cache, nke anyị ga-atụle n'okpuru.
Rịba ama: A na-echekwa kuki maka naanị otu nnọkọ, ya bụ, ruo mgbe emechiri ihe nchọgharị ahụ, n'ihi ya ị nwere ike ịmalitegharịa ihe omume ahụ iji kpochapụ faịlụ a ngwa ngwa.
Cache - faịlụ nwa oge, nke na-ebu ụzọ mee ka ọ dị mfe na ọbụna na-agba ọsọ Internet sọọfụ, ma mgbe ahụ, na mmụba na olu ha, n'ụzọ dị iche, ha nwere ike ịkwụsị ọrụ nke ihe nchọgharị weebụ, na-etinye nnukwu ibu na diski ike na usoro n'ozuzu ya. Ihe ndekọ ndị a, dịka kuki ahụ e kwuru n'elu, a ga-ehichapụ site n'oge ruo n'oge. Ị nwere ike ịchọpụta otu esi eme nke a na isiokwu kwekọrọ na website anyị.
Gụkwuo: Na-ehichapụ oghere na ihe nchọgharị weebụ
Dị ka ọ dị n'ịme nke ọ bụla n'ime usoro ndị a dị elu, mgbe ị kpochara cache, gbalịa na-agba Rambler Mail na nyocha gị - ọrụ ahụ kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọ bụrụ na oge a adịghị eme, gaa n'ihu.
Gbanyụọ ọnọdụ mmekọrịta
Ọnọdụ njikọ ọnụ bụ nnọọ ihe bara uru n'ọtụtụ, mana ọ bụghị ikpe niile. Ya mere, ọ bụrụ na arụ ọrụ ya na ihe nchọgharị a na-eji aga na saịtị Rambler Mail, ọrụ ozi-e nwere ike ịjụ ịmalite. Mgbe ụfọdụ na peeji nke ahụ, enwere nkọwa na-emetụta ya na-akọwa nsogbu ahụ ma nye ya ngwọta, mana nke a abụghị mgbe niile.
Iji gbanyụọ ọnọdụ ndọtị onwe gị, soro usoro ndị dị n'okpuru. N'ihe atụ anyị, a na-eji Google Chrome, ma ntụziaka ahụ a chọrọ ga-emetụta nnọọ ihe nchọgharị ọ bụla.
Na desktọọpụ, chọta ụzọ mkpirisi nchọgharị (ị ga-achọ imechi usoro ahụ tupu oge), pịa aka nri na ya (PKM) na họrọ ihe "Njirimara".
Na mpio nke meghere, gaa na taabụ "Njikọ" ma kpochie igbe ahụ "Ntugharị usoro na ọnọdụ ndakọrịta".
Ọzọ, pịa bọtịnụ dị n'okpuru. "Tinye" ma "OK" iji mechie windo Njirimara.
N'ịbụ ndị nwere nkwarụ ọnọdụ ntanetị, malite ihe nchọgharị ahụ ma kwagharịa na ebe nrụọrụ weebụ Rambler na ya. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ akwụ ụgwọ - nnukwu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-achọ ọrụ ndị ọzọ.
Hụkwa: Ịkwụsị ọnọdụ mmekọrịta na Internet Explorer
N'ọnọdụ ebe ọ bụla n'ime ụzọ ndị e depụtara na akụkụ a nke isiokwu ahụ nyere aka dozie nsogbu ahụ na ọrụ nke Rambler, ma enweghi ike ịnweta ọrụ site na ihe nchọgharị, ịkwesịrị ịtinye ya. Ma nke a kwesiri ime n'ụzọ ziri ezi - nke mbụ, ị ga-ewepu ihe ochie na data ya, kpochapụ usoro sitere na faịlụ na faịlụ nwa oge, ma ọ bụ naanị mgbe ị wụnyere usoro ihe omume ahụ site na nbudata ya na saịtị ọrụ.
Iji kpochapụ ihe nchọgharị weebụ gị, jiri otu n'ime isiokwu dị n'okpuru ebe a. Mgbe ịmechara usoro a, ihe omume CCleaner na nduzi anyị zuru ezu iji mee ihe ga-enyere aka ikpochapụ usoro.
Mmemme iji wepu mmemme
Esi ewepu ihe omume site na iji Revo Unistaller
Ihichapu kọmputa site na mkpofu site na iji usoro CCleaner
Esi tinyegharịa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandeks.Browser
N'ọtụtụ ọnọdụ, ntinye zuru ezu nke ihe nchọgharị weebụ na-enye gị ohere iwepu nsogbu niile na-ebili na ọrụ ya. N'etiti ndị ahụ, na ịnweta ụfọdụ saịtị, karịsịa, anyị na-atụle Rambler Mail na ya ilk. Ọ bụrụ na nke a adịghị arụ ọrụ ọrụ ozi, jiri ndụmọdụ dị n'okpuru ebe a.
Nhọrọ: Ad blockers
N'oge na-adịbeghị anya, Rambler Mail rịọrọ ka a gbanyụọ mkpọchi mgbasa ozi na ibe ya, nke a na-egosi site na nkwekọrịta kwekọrọ na akụkụ aka nri nke isi windo nke ọrụ ozi. Nke ahụ bụ, n'agbanyeghị agbatị ị na-eji maka nzube a na ihe nchọgharị gị, ị ga-achọ iwepụ ya. N'igbochi egwu zuru oke, anyị mara na mgbasa ozi na saịtị a adịghị apụta, ma ọ nweghị ihe ga-egbochi ọrụ nke ihe niile na ọrụ ya.
Rịba ama: Ngwadogwu Nchọgharị maka mkpọchi mgbasa ozi anaghị egbochi ozugbo ịbanye na Rambler Mail, nke a na-apụghị ikwu maka ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị tụlere n'isiokwu a. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịbanye na ozi nzi ozi, zoo aka na ngwọta ndị a, wee hụ ntụziaka dị n'okpuru.
Hụkwa: Nke ka mma - AdGuard ma ọ bụ AdBlock
Mgbakwunye, gụnyere AdBlock, AdBlock Plus, AdGuard, UBlock Origin na ndị ọzọ, ekwela ka ọrụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma. Otu n'ime ihe kachasị na-esi na ha eme ihe kwesiri igosi nsogbu na mmeghe ma ọ bụ izipụ akwụkwọ ozi, enweghị ike iziga ma / ma ọ bụ zipu, na ọtụtụ ihe ọzọ. N'otu oge, peeji nke akwụkwọ edemede (nke na-abata, ndị na-apụ apụ, ndị ntanetịpụ, wdg) nwere ike ịdị ka nke mbụ na igodo nwere ike ọbụna ịrụ ọrụ n'etiti ha.
Ya mere, iji gbanyụọ ọnyà mgbasa ozi na ihe nchọgharị ọ bụla, ịkwesịrị ịpị aka-ekpe na akara ngosi ya n'aka nri nke ebe nkesa.
Dabere na nke mgbasa ozi mgbasa ozi ị na-eji, mee otu n'ime ihe ndị a:
Adblock - họrọ ihe dị na listi ndọpụta "Kwadoro na saịtị a";
Chebe - gbanwee gaa na arụ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ (aka ekpe) mgbagharị mgbagharị na-abụghị ihe "Nzacha na saịtị a";
uBlock Oti - Pịa aka ekpe na bọtịnụ-acha anụnụ anụnụ dị ka ngbanwu / gbanyụọ ọkụ ka ọ ghara ịdị n'ọrụ;
Ọ bụrụ na ị jiri mgbakwunye ọzọ iji gbochie mgbasa ozi, soro usoro ndị a kọwara n'elu.
Melite Mail Rambler peeji nke ma ọ bụrụ na nke a adịghị eme na-akpaghị aka (CTRL + F5 na keyboard).
Mgbe ịmechara usoro ndị a dị mfe, ịnwere ike ịnụ ụtọ ọrụ nke ọrụ ahụ n'enweghị nkwupụta nzuzo na mkpa. Ọ bụrụ na, agbanyeghị, ndụmọdụ ndị a kọwara na akụkụ a nke isiokwu ahụ enyereghị gị aka idozi nsogbu ahụ na ọrụ nke Rambler Mail, gaa n'ihu ngwọta ọzọ.
Ebumnuche nke 3: Akwụkwọ edemede Nche
Na nke a, ịkwesiri ijide n'aka na oge ịtọ na kọlọtọ PC bụ eziokwu. Maka nke a:
Na ngalaba ọrụ na-achọ elekere.
Mepee nyocha ọ bụla (dịka ọmụmaatụ Google), anyị na-ede n'ebe ahụ, dịka ọmụmaatụ, "Oge na Kazan" ma chọpụta nsonaazụ ya na PC elekere.
N'ihe banyere nkwekọrịta, pịa nri na aka "Ịtọ oge na oge".
Na window ntọala nke meghere, chọọ ihe ahụ "Gbanwee ụbọchị na oge" wee pịa "Gbanwee".
Na window windo, mepụta oge kwesịrị ekwesị na pịa "Gbanwee".
Ọ naghị afụ ụfụ iji kwalite sistemụ ahụ ka ọ bụrụ nke kachasị ọhụrụ. Etuwara n'ụzọ zuru ezu iji mee nke a:
Esi kwalite Windows 10
Esi kwalite Windows 8
Ebumnuche nke 4: mkpọchi igbe igbe
Ọ bụrụ na ị naghị eji Rambler e-mail ruo ogologo oge, enwere ike igbochi nke mbụ iji nweta akwụkwọ ozi wee ziga ha. Na nke a, ịkwesịrị ị kpọghee akaụntụ ahụ. A na-eme nke a dị ka ndị a:
Rịba ama: Nzọụkwụ ndị a kọwara n'okpuru ebe a ga-arụ site na kọmputa ahụ.
The Rambler Mail Unlocking Page
Soro njikọ ahụ gaa na ibe weebụ ọrụ pụrụ iche. Tinye aha njirimara na paswọọdụ nke akaụntụ gị, wee pịa "Nbanye".
Na peeji na-esonụ, banye nbanye na paswọọdụ nke e-mail gị na mpaghara kwesịrị ekwesị, wee dọọ igbe ahụ Unlock.
Pịa bọtịnụ ahụ "Nbanye" maka ikike na ozi nzi ozi Rambler.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na ọrụ nke Rambler Mail n'ihi nchịkọta ya n'ihi ogologo "ezighị ezi," ndị a kọwara akọwa ga-enyere ha aka iwepu ha.
Ebumnuche 5: Ihichapụ igbe akwụkwọ ozi
Mgbe ị na-ehichapụ akaụntụ Rambler, nke a na-akpọ "Profaịlụ Nanị," a na-ehichapụ igbe igbe ozi ahụ. A na-ehichapụkwa ọdịnaya ya niile na ozi-e n'ụdị akwụkwọ ozi na-abata ma na-apụ apụ. Iso onye na-ehichapụ akaụntụ ahụ - onye ọrụ n'onwe ya ma ọ bụ ndị na-asọ oyi - enweghị uche, ebe ọ bụ na mgbe ịmechara usoro a, ọ gaghịzi enwe ike iweghachi ma ọ bụ igbe dị na Rambler ma ọ bụ data ahụ echekwara na ya. Nanị ngwọta ọ ga - ekwe omume, ọ bụ ezie na enwere ike ịkpọ ya dịka nke a, ọ bụ mmepụta akaụntụ Rambler ọhụrụ.
Gụkwuo: Email Registration na Rambler
Ebumnuche nke 6: Nkwụsị ọrụ nwa oge
N'ụzọ dị mwute, n'oge na-adịbeghị anya nsogbu kachasị akpata nsogbu na ọrụ nke Rambler Mail bụ nkwụsịtụ nwa oge. N'otu oge ahụ, ọ dị mwute ikwu maka ndị ọrụ, ndị nnọchianya na-ahụ maka ọrụ anaghị adị mgbe ọ bụla na-akọ akụkọ a, ha anaghị ekwukwa banyere mkpochapụ nsogbu. Ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe na - abaghị uru ma na - agbalị ịkpọtụrụ aka na teknụzụ Rambler - azịza na - abịa ụbọchị ole na ole mgbe e mesịrị, na ọbụna mgbe e mesịrị. Akwụkwọ ozi ahụ n'onwe ya na-ekwu ọnọdụ ahụ: "Ee, ọ bụ ihe ndabara, ihe niile kagburu."
N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị na ndị na-eje ozi na-adịghị njikere ikwu okwu banyere ọrụ ya n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahapụ njikọ na ụdị nzaghachi. Na ibe a, ị nwere ike ịjụ ajụjụ gị, tinyere ihe ọ bụla nwere ike ime, ezughị oge, nsogbu ha na oge igbu oge.
Ị nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ naanị gị ma ọ bụ ndị ọrụ ndị ọzọ nwere nsogbu na mail Rambler, na ihe nchọgharị weebụ. Ọrụ ndị dị otú ahụ na-arụ ọrụ nke saịtị na ọrụ onye ọrụ na ha, na-egosipụta oge ọdịda, "nbibi", nkwụsị nke ndị bịara. Otu n'ime ihe ndị ahụ nlekota oru bụ DownDetector, njikọ nke a gosipụtara n'okpuru ebe a. Na-agagharị na ya, chọta Rambler n'ebe ahụ ma lelee ọrụ ya na oge.
Gaa na DownDetector online
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ihe mere Rambler Mail anaghị arụ ọrụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike iwepụ ngwa ngwa; maka ndị ọzọ, ị ga-anwale nwa ntakịrị ma mee mgbalị ụfọdụ, ma enwerekwa nsogbu ndị onye ọrụ ahụ na-enweghị ike ịnagide onwe ya. Anyị nwere olileanya na ihe a zuru ezu bara uru nye gị ma nye aka weghachi ọrụ nke ozi nzipu.